कहिलेबाट खुल्छ म्यादी प्रहरीमा भर्ना ? यस्तो आयो सूचना — Imandarmedia.com
कहिलेबाट खुल्छ म्यादी प्रहरीमा भर्ना ? यस्तो आयो सूचना
काठमाडौ।आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनको सुरक्षाका लागि प्रहरी र अरू सुरक्षा निकायले पनि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले पनि सुरक्षा रणनीतिको गृहकार्य सुरु गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागका डीआईजी रवीन्द्र धानुकको नेतृत्वमा निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा समिति गठन गरिएको छ।
समितिले आवश्यक कामहरू सुरु गरिसकेको डीआईजी धानुकले जानकारी दिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक जनशक्ति, स्रोत–साधन, बजेटलगायत विषयमा समेत गृहकार्य गरिरहेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी माग गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ। उनीहरूलाई दुई महिना बराबरको तलब सुविधा माग गर्ने तयारी समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ। आउँदो चैतमा म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना लिइने कार्यालयले जनाएको छ।
भर्नामा अवकाशप्राप्त सेना, प्रहरीलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ। अवकाशप्राप्त सेना, प्रहरीसँग अनुभव हुने भएकाले उनीहरूलाई परिचालन गर्न सहज हुने सुरक्षा निकायको बुझाइ छ।
गृह मन्त्रालयले समेत पछिल्लो १० वर्षमा अवकाश पाएका सेना, प्रहरी र सशस्त्रको विवरण राख्न सम्बद्ध सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ।प्रहरीले विस्तृत सुरक्षा कार्ययोजना गृह मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ।
०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। योपटक एकैचरणमा हुनेछ। ०७४ सालको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना लिइएको थियो।
निर्वाचनमा चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालन हुँदै आएका छन्। मापदण्ड अनुसार म्यादी प्रहरी हुन १८ वर्ष पूरा गरी ५४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। साधारण लेखपढ गर्न जान्ने र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार नठहरिएको र शारीरिक र मानसिक रुपले तन्दुरुस्त रहेको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ। यसरी नियुक्त भएका म्यादी प्रहरीले जनपथ प्रहरीसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने छ।
काम छाडेर वा अरुलाई जिम्मा लगाएर कतै जान वा भाग्न पनि रोक लगाइएको छ। बीचमा काम छाडेर हिँडे वा जिम्मेवारी पूरा नगरे सुविधा रोक्का हुने मापदण्डमा उल्लेख छ। कुनै म्यादी प्रहरीले जानाजान सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरे उसैबाट असूल गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
तेस्तै, भर्खरै साधारण सेयर निष्काशन आईपीओ जारी गरेको एक कम्पनीको आवेदन दिने म्याद थपिएको छ। ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडले आयोजना प्रभावितहरुका लागि बिक्रि खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने म्याद थपिएको हो।
कम्पनीले यस अघि आईपिओमा फागुन १६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएकोमा अब म्याद थप गरि फागुन २३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ। कम्पनीले फागुन २ गतेदेखि साधारण सेयर आईपिओ बिकी खुला गरेको हो।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित ओखलढुंगा र रामेछापवासीहरुका लागि साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो। कम्पनीले प्रति शेयर अंकित मुल्य रु. १०० दरका ३१ लाख २५ हजार कित्ता साधारण शेयर आयोजना प्रभावितलाई निष्काशन गरेको हो।
यस आईपिओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र खिजिदेम्बा गाउँपालिका–१ साविक रगनी गा.वि.स., ओखलढुङ्गा, खिजिदेम्बा गाउँपालिका २ साविक रगनी गा.वि.स., ओखलढुङ्गा, खिजिदेम्बा गाउँपालिका ३ साविक खिजीचण्डेश्वरी गा.वि.स., ओखलढुङ्गा, लिखु गाउँपालिका ९ साविक पोकली गाविस, ओखलढुङ्गा, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका १ साविक दुरागाउँ गाविस, रामेछाप, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका २ साविक सैपु गाविस, रामेछाप र उमाकुण्ड गाउँपालिका ७ साविक भुजि गाविस रामेछापमा स्थाई बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुले मात्र आवेदन दिन सक्ने छन्।
आवेदन दिंदा न्युनतम १० र अधिकतम ५०,००० कित्ताको लागि आबेदन दिन सकिने छ। कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्रि प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ।कम्पनीले आयोजना प्रभावितलाई आइपीओ निष्काशन गरे पश्चात सर्वसाधारणको लागि आइपीओ निष्काशन गर्नेछ।
त्यसपछि कम्पनीको सेयर संरचना ८० प्रतिशत संस्थापक र २० प्रतिशत सर्वसाधारणको हुनेछ भने चुक्तापुंजी ३ अर्ब १२ करोड पुग्नेछ। कम्पनीले ओखलढुंगामा ५२।४ मेगावाटको लिखु ४ हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।